Kedu onye ga-erite uru site na nkwụsị ọrụ metụtara mmechi ụlọ akwụkwọ? Ọ bụrụ n ’ịnwere ike inweta ya, kedu ego ya na oge ịkwụ ụgwọ ya?
Edere site Tranquillus | Mar 21, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Certainly na-ajụ onwe gị ọtụtụ ajụjụ ugbu a. Ọ bụrụ na m ga-edeberịị ụmụ m n ’ụlọ na ọrụ ntanetị agaghị ekwe m omume. Mechanzọ ndị gọọmenti siri tinye ọnọdụ maka ọnọdụ ndị a niile?
Nweghị ike ịkwado ma lekọta nwatakịrị nọ n'okpuru 16.
Gọọmentị ehiwela usoro pụrụ iche nke mkpuchi mkpuchi ọrịa na-esite na nkwụsị ọrụ. Umu ihe ndia n’eme ka umuaka muta gi.
Inwere ike ije ezumike na-arịa ọrịa a na kwa ụbọchị na-eso ya.
Ọ bụrụ na nwa gị erubeghị 16:
- Na ọ gaghị ekwe gị omume ịrụ ọrụ na ntanetị bụ na iwu ji gị ka ị kwụsị ọrụ niile iji na-azụ ụmụ gị.
- Nwa gị ruru afọ iri na isii n’ụbọchị e depụtara nkwụchi ahụ.
Ọ bụrụ na nwa gị gbara afọ iri na isii ma ọ bụ karịa, ị gaghị enweta ụgwọ ọrụ ọ bụla. Ewezuga ụmụaka na-erubeghị afọ 16, nkwarụ, gụrụ akwụkwọ na ụlọ ọrụ pụrụ iche n'oge nkịtị.
Ogologo oge ole ka ịkwụsị ọrụ a bụ?
Oge ezumike nke a ga-enye gị nwere ike ịgbatị ruo ụbọchị iri na anọ. Nke ahụ bụ ịsị na ị ga-agụta ụbọchị iri na anọ tinyere ngwụsị izu site na ndenye aha ezumike ọrịa. A ga-eme nkwupụta ọhụụ kwa ụbọchị iri na anọ ruo na njedebe nke oge ụlọnga. Naanị otu n'ime nne na nna ahụ nwere ike irite uru na ngwaọrụ a. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-ekwe omume ịkekọrịta ya n'etiti nna na nne ya yana kwa ịkọwa ya.
GỤỌ Kedu otu esi emepụta ọrụ gị ma bụrụ onye onwe gị?
Olee ihe ndị ị ga-eme?
Dị ka onye ọrụ, ị nweghị usoro ị ga - eme karịa na ịgwa ndị na - ewe gị ọrụ ọrụ. Onye were gị n'ọrụ ga-ezigara gị CPAM ozi niile dị mkpa. N’ezie ọ bụ ajụjụ na-egosi na enweghị ike izi ozi telegram, ị bụ na-elekọta ụlọ. A na-etinye ndị ọrụ nke atụmatụ izugbe na usoro a. Usoro a anaghị emetụta ndị ọrụ gọọmentị na ndị dabere na atụmatụ ndị ọzọ pụrụ iche. Ndị na-arụ ọrụ onwe ha na-elekọta ime nkwupụta ahụike nke mkpuchi ahụike.
Kedu mgbe ị ga-anakọta ego ego gị?
Site na oge onye were gị n'ọrụ mere usoro ahụ na saịtị ahụ enyere maka ebumnuche a. Will ga-enyere gi ego mmachi akpa nke ubochi, nke nlele site na mkpuchi ahuike. N’ezie, aghaghi ikwugharị ihe ndị ị na - akwụ ụgwọ dịka usoro ị na - emebu. Oge a chịkọtara ma hazie ozi a nwere ike ịdị ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ karị dabere n'ọnọdụ dị n'ógbè gị. Isi ihe na-adọrọ mmasị icheta, a ga-akwụ gị ụgwọ ụbọchị izu ike gị niile. Enweghị ụbọchị nke erughị eru na enweghị akwụkwọ nyocha banyere mmeghe nke ikike gị.
Ihe atụ leta Nleba anya na nlekọta ụlọ n'ụlọ.
Nke a bụ ọmụma ọkwa, dị mfe, asambodo iziga onye were gị n'ọrụ site na mail ma ọ bụ site na mail. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike izipu ya na nnabata nke nnata site na iji ọrụ ntanetị si na post ọfịs.
N'ịchọ, achọrọ m maka ịlaghachi ọsọ ọsọ na post m, agbachitere m, dị ka ekwenyero, akwụkwọ nlekọta nwa m.
GỤỌ Mụta ilere akara nke akwụkwụ gị n'usoro
Lee anya n’isi nso
Aha izizi aha NAME
Ngosiputa nke umu aka na ulo
M, nke edeputara "Aha mbụ aha nke onye ọrụ", na-ekwupụta na nwa m "Aha mbụ aha nwatakịrị ahụ", afọ "nwatakiri ahụ" afọ ka etinyere aha ya na nguzobe "Aha nguzobe" nke commune "Aha nke commune", emechiri maka oge site na "ụbọchị" ruo "ụbọchị" dịka akụkụ nke njikwa nke ọrịa coronavirus.
Ana m egosipụta na ọ bụ naanị nne na nna rịọrọ nkwụsị ọrụ ka m nwee ike idobe nwa m n'ụlọ.
Emere na "ebe" na "ụbọchị"
"Aha mbụ aha nna nke onye ọrụ"
Kedu onye ga-erite uru site na nkwụsị ọrụ metụtara mmechi ụlọ akwụkwọ? Ọ bụrụ n ’ịnwere ike inweta ya, kedu ego ya na oge ịkwụ ụgwọ ya? Ọnwa Iri na Otu 22, 2020Tranquillus
gara agaKwadebe Ozi Ọnụnọ akpaaka maka ezumike
-esonụA ga-akwụ gị ụgwọ Coronavirus na ele mmadụ anya n'ihu, 84% nke ụgwọ ọnwa gị.
Developmentnye Ọzụzụ Ọmụmụ Nkwado Ọkachamara
Kedu otu esi emepụta ọrụ gị ma bụrụ onye onwe gị?
Ozi banyere onwe gị: ihe niile ịchọrọ ịma
Ihe ị chọrọ ịma banyere ịghara